Guddoomiye Jawaari oo sheegay in la dadajinayo qabashada Doorashada Madaxweynaha dalka | SAHAN ONLINE
Guddoomiye Jawaari oo sheegay in la dadajinayo qabashada Doorashada Madaxweynaha dalka
MUQDISHO – Guddoomiyaha Aqalka hoose ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa kulan la yeeshay qaar kamid ah Musharaxiinta madaxweynaha,wuxuuna sheegay in la dadajin doono xiliga la qabanayo doorashada.
Guddoomiye Jawaari ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay qaar kamid ah musharaxiinta ka cabanaya dib u dhaca lagu keenay Doorashada Madaxweynaha.
Waxa uu kulamadii ugu danbeeyey la yeeshay Isbahaysiga Musharaxiinta ay kamid yihiin madaxweynihii hore Shiikh Shariif Axmed iyo Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo isagu hada hada xubin ka ah Aqalka sare.
Guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in warar been ah laga baahiyey doorashada balse ma mahan mid weli la shaaciyey ,waxaase lagu dhawaaqi doonaa marka ay dhammaato doorashada Guddoonka Aqalka sare.
Waxaa jira warar been ah oo la baahiyey balse xiliga doorashada maaha mid weli la shaaciyey waxaana lagu dhawaaqi doonaa marka ay dhamaato doorashada Guddoonka Aqalka Sare, waxaana kadib fadhi yeelan doona Labada Aqal oo shaacin doona xiliga doorashada…” ayuu yiri Jawaari oo sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin inay dadajiyaan Doorashada Madaxweynaha.